Bayaan Beesha Nugaal Soo Saartay.
Waxaa Soo Gaarsiiyay AllPuntland oo lagala Xiriirayaa
Kadib markii wadatashi iyo ukuurgeled dheeraad ah eey sameeysay jaaliyadda Beesha Nugaaleed ee ku nool cariga Mareekanga, Yurub iyo wadanka gudihiisaba waxyaalaha ka dhacay Garoowe iyo gudahaanba Puntland, dood dheer kadib waxa eey isku raaceen iyagoo u gudbiyey go�ankooda waxgaradka iyo odayaasha nabadda kashaqeenaya ee Garoowe.
In Suldaan Garaase uusan kuhadli Karin magaca Beesha Nugaal maadaama uu noqday shakhsi siyaasi ah oo dano meel kale lagamaamulo u ordaaya kana fogaaday sifooyinki lagu yiqiin nabadoon.
In Beesha Nugaaleed eey markasta heegan u tahay difaaca iyo midnimada dadka walaalaha ee Puntland.
In inta xal loogahelaayo khilaafka Puntland uu mudane Cabdullahi Yusuf yahay madaxweeynaha sharciga ee Puntland.
In dowladda Puntland cid aan ka socon eeysan uga qeebgeli karin shirarka nabadeenta Somaliya iyo kan caalamiga ahba.
In Somalia sida keliya eey nabad uga dhici kartaa eey tahay in degaanada xooga lagu heesto laga kaco. Nina ku waarimayo dhul uusan laheeyn.
In taageero buuxda lasiiyo Generaal Morgan dagaalka uu kula jiro dadka meek kale ka soo duulay oo xooga ku heeysta dhul iyo hanti eeysan laheeyn.
Dr. Mohamed Khaliif